တစ်မိသားစုလုံး အဆိပ်သောက်၍ အဆုံးစီရင်ရာမှ ရှမ်းတိုင်းရင်း မဟာဖြေဆေး အစွမ်းကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူ မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်မှန် – Wun Yan
တစ်မိသားစုလုံး အဆိပ်သောက်၍ အဆုံးစီရင်ရာမှ ရှမ်းတိုင်းရင်း မဟာဖြေဆေး အစွမ်းကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သူ မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ ဖြစ်ရပ်မှန်
၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၄
လူ့ဘဝ လူ့လောကကြီးတွင် လူရယ်လို့ဖြစ်လာကြတဲ့အခါ လောကဓံတရား ၈ ပါးနဲ့ကင်းဝေးကြသူရယ်လို့ မည်သူမှမရှိကြပါဘူး ၊ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းအစိုးရမှစလို့ ဟိုးအောက်ခြေ လူမွဲများအထိနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့လောကဓံတရားရဲ့ရိုက်ပုတ်တဲ့ဒဏ်တွေကို ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုး ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွန်းလှန်ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်ရဲတဲ့သူတွေရှိကြသလို ဒုက္ခပေါင်းစုံကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှူံးပေးလိုက်ကြရပြီး လူ့ဘဝထဲကနေအပြီးအပိုင် မိမိကိုယ်မိမိအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနေ့စဉ်လိုလိုကြားနေမြင်နေကြရပါတယ်..
ဒါပေမယ့် တစ်မိသားစုလုံး ၊ တစ်အိမ်သားလုံးကို ရခဲလှတဲ့လူ့ဘဝထဲကနေအပြီးအပိုင်ဆွဲထုတ်သွားဘို့ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့မိဘတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်း အံ့သြတုန်လှုပ်မိခဲ့ရပါတယ် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ညပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဖြတ်မြို့ရဲ့ စျေတန်းရပ် ( ကွက်သစ် ) ၊ အိမ်အမှတ် တ/၈၂ ၊ စိတ္တသုခဘုန်းကြီးကျောင်း အဝင်မုခ်ဦးရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ အာခါ – လားဟူတိုင်းရင်းသား တစ်မိသားစုလုံး ၊ စုစုပေါင်း (၆) ယောက်စလုံးကို ” နံနွယ် ( လားဟူအခေါ် ) နန်ငိုပင်” ဆိုတဲ့နွယ်အဆိပ်ပင် ၊ အမြစ်တို့ကိုသေချာစွာချက်ပြုတ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူအသက် (၄၈) နှစ်အရွယ် ဒေါ်အီနားက သားသမီး (၄) ယောက်စလုံးကို အရင်တိုက်ကျွေးတယ် ၊ ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးစလုံးသောက်ပြီး တစ်မိသားစုလုံး မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ် ။
စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မနက် ဝ၇:၀၀ ချိန်လောက်မှာ ( ၁၃ ) နှစ်အရွယ် သမီး မနောမိလေးဟာ အိမ်အပေါက်ဝကနေဝမ်းလျားမှောက်လျှက်အနေအထားကနေ အိမ်ရှေ့လမ်းတစ်ဘက်ခြမ်းက မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဦးအားလွေကို ငိုယိုပြီးလက်ယပ်လှမ်းခေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သူ၏မောင်ငယ် အသက် (၉) နှစ်အရွယ် မောင်ဆီလှတို့ကိုအချိန်မှီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထဲမှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူဦးအားမြာ (၄၆) နှစ် ( အာခါ ) ၊ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်အီနား (၄၈) နှစ် ၊အကိုဖြစ်သူမောင်ထောမေ (၁၅) နှစ်နှင့်မောင်အငယ်ဆုံးဖြစ်သူ မောင်နေလင်းထွန်း (၈) နှစ်တို့ဟာ နှာခေါင်းမှသွေးများယိုစီးပြီး ပါးစပ်မှအမြှုပ်များထွက်ကာအသီးသီးသေဆုံးနေကြောင်းရင်ထုမနာငိုယိုပြောပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။
ချက်ခြင်းဘဲရပ်ကွက်လူကြီးများ ၊ တာဝန်ရှိပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်လာကြပြီး သေမှုသေခင်းဖြစ်စဉ်အချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးရုပ်ကလပ်တွေကို ဆေးရုံကိုသယ်ဆောင်သွားကြတယ် ၊ တော်သလင်းလပြည့်နေ့မှာအစိမ်းသေသည်ဟုယူဆကြသည့်အတွက် နောက်နေ့မကူးဘဲ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့နေ့လည်မှာဘဲသဂြိုလ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ လားဟူတိုင်းရင်းသားကျောင်းဆရာဦးဂျလာက ဆက်လက်ပြောပြပါတယ် ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိုင်းဖြတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုသွားပြီး အသက်မသေဘဲဆေးကုသမှုခံယူနေကြတဲ့ သမီးငယ်လေးနဲ့သူ့မောင်လေးအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ် ၁ သိန်းလှူခဲ့ရင်း အခြေအနေကောင်းမွန်နေလို့အားပေးစကားတွေပြောရင်း ဖြစ်စဉ်မဖြစ်ခင် အဖေတွေအမေတွေဘာပြောသံကြားသလဲဆိုတော့ ” စိတ်ညစ်လိုက်တာ ” လို့ခဏခဏညည်းတွားနေတဲ့အသံကိုဘဲကြားရတယ်လို့ဖြေပါတယ် ၊ သမီးတို့ကိုဒီအမြစ်ပြုတ်ရည်တွေတိုက်တော့ဘာလို့ပြောပြီးတိုက်တာလဲလို့မေးတော့ ” ဆေးရည် ” လို့ပြောပြီးတိုက်တယ် ၊ ဒီအပင်တွေကအဖေကိုယ်တိုင်တောင်ပေါ်ကနေခူးလာတာလို့ပြောတယ် ၊ အရသာကအရမ်းခါးတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ သူတို့ကိုတိုက်ပြီးမကြာခင်အဖေနဲ့အမေကသောက်တယ် ၊ ခဏအကြာမှာ အမေက ” သမီးဘယ်လိုနေသလဲ ? ” လို့မေးပါတယ်
” သမီးက လောလောဆယ် ဘယ်လိုမှမနေသေးဘူးလို့ဖြေတော့ အမေက အကယ်၍ အမေတို့အဖေတို့သေသွားရင် ငါ့သမီးဘယ်သူနဲ့နေခဲ့မှာလဲ ” လို့မေးပါတယ် ၊ သူဘာမှပြန်မဖြေခဲ့ပါဘူး ၊ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း သတိလစ်သွားတာလား ၊ အိပ်ပျော်သွားတာလား ? မမှတ်မိခဲ့ပါဘူး ၊ ညဘက်ဗိုက်အောင့်လို့နိုးလာတော့ ပျို့အန်ချင်သလိုဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထပြီး လက်ညိုးထိုးပြီးအန်ခဲ့တယ် ၊ မဟာဖြေဆေးသောက်တော့ မောင်လေးကလည်းတောင်းစားပါတယ် ၊ ပြီးတော့မောင်လေးလည်းထိုးအန်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီကနေ အိပ်ပျော်သွားတာမိုးလင်းမှဘဲ အဖေရယ် ၊ အမေရယ် အကိုနဲ့မောင်ငယ်လေးတို့သေဆုံးနေကြတာကိုသိရတာပါဆိုပြီး ငိုသံလေးဖြင့်ပြောပြပါတယ်😥😥
အကိုဖြစ်သူမောင်ထောမေ (၁၅) နှစ်ကတော့ သတ္တမတန်း ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆင်းချိန် မိုင်းဖြတ်မြို့ဂေါက်ကွင်းမှာ ဂေါက်ဖ်ကယ်ရီလိုက်ပြီးသူ၏ကျောင်းစရိတ်ကိုရှာခဲ့သည်ဟုသိရပါသည် ၊ သူမသေဆုံးမီ ၂ ရက်အလိုတွင်သူ၏လက်ကိုင်ဖုန်းလေးကိုသူငယ်ချင်းဖြစ်သူအားတီအား ” မင်းဘာမုန့်စားမလဲ ? ငါကျွေးမယ် ၊ ငါ့ဖုန်းလည်းမင်းယူလိုက်တော့ နောက် ဆိုငါရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး ” လို့လည်းပြောခဲ့တယ်လို့ ပြောပြကြပါတယ်.
သူ့မိဘတွေမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေများကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရလို့တစ်မိသားစုလုံးယခုလိုသေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ကြတာလဲ ? ဘာဖြစ်လို့သားသမီးတွေကိုပါတစ်ပါတည်းသေရွာကိုခေါ်ဆောင်သွားဘို့ မိုက်မဲစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်း ? တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒုက္ခအခက်အခဲတွေဟာလူတွေကိုသေစေလောက်အောင်တော့မရက်စက်နိုင်ပါဘူး ၊ ဘဝအခက်အခဲဆိုတာ အရှုံးပေးဘို့မှမဟုတ်တာ ၊ ဒါဆိုရင်သူတို့မိသားစုလုံးကို လူ့လောကကြီးမှာဆက်ပြီးရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်မျိုးမမြင်ချင်လို့ ခြိမ်းချောက်ခံရတာမျိုးတွေကရောရှိနေတာအမှန်ဘဲလား ? အရပ်စကားအရမှန်နေခဲ့ရင်လည်း ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးကလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ သို့လောသို့လောအတွေးတွေကလည်း ပဟေဋ္ဋိဆန်လွန်းခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါကတော့ မှုခင်းပိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ရဲအရာရှိတွေကဘဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ် ၊။
သမီးလေးရဲ့ကုတင်ဘေးနားမှာသူ့ရဲ့အတန်းပိုင်ဆရာမနှင်းဟေမာလွင်က တော့ သူတပည့်မလေးရဲ့လိမ္မာရေးခြားရှိပုံတွေကိုပြောပြရင်းကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ရေး ၊ ပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်သောကဖြစ်နေပုံကိုပြောပြပါတယ် ၊ လူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မိဘနှစ်ပါးစလုံးမရှိတော့ပေမယ့်အားမငယ်ဘို့ ဆရာမစကားကိုနားထောင်ဘို့အားပေးစကားတွေပြောခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘဝဟာမည်မျှကြမ်းတမ်းခက်ခဲအုံးမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မိဘမဲ့ခဲ့၍ကိုယ်ချင်းစာနာမိခဲ့ပါတယ် ၊ ။
သေဆုံးသူမိဘတွေဟာ ယခင်ကမိုင်းဖြတ်မြို့နယ် နမ့်လင်းတောင်ဘက် ၄၅ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ နောင်ပန်နက် ( လားဟူ ) ရွာမှာနေထိုင်ပြီးတောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းအလုပ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ကြရင်း သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုငှဲ့ညှာကာ မိုင်းဖြတ်မြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လာကြတာ (၆) နှစ်ရှိပြီဟုဆွေမျိုးနီးစပ် ကျောင်းဆရာဦးဂျလော ( နမ့်ပန်အုပ်စု ၊ ဟိုပါလောင်းရွာ ) မှပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
ယခင်ကခြံစောင့်အလုပ်လုပ်ရင်းတောင်ယာစိုက်ပျိုးသည့်အလုပ်ကိုဘဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ ယခုအခင်းဖြစ်ပွားသည့်ခြံသည် တစ်ဧကနီးပါးကျယ်ဝန်းပြီးခြံပိုင်ရှင်က မေတ္တာဖြင့်အခမဲ့ နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသည့် ၁၅ ပေပတ်လည်ခန့် ကျူထရံကာနေအိမ်လေးဖြစ်ပါသည် ၊ အဲ့ဒီခြံထဲမှာဆင်းရဲချို့တဲ့စွာနေထိုင်လာကြတာ တစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ် ။
လားဟူတိုင်းရင်းသားဆရာဦးဂျလောကတော့ ဒီနံနွယ် ( ခ) နန်ငိုပင်ဟာအင်မတန်အဆိပ်ပြင်းတဲ့နွယ်ပင်ဖြစ်ပြီးမြင့်မားတဲ့တောင်ထိပ် ၊ အေးမြတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ရောက်ပြီး သူ့အပွင့်ဟာအဝါရောင်သန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ သူ့အပွင့်ရဲ့ဝတ်ရည်ကိုစုပ်မိတဲ့ပျားတောင်နေရာမှာတင်ချက်ချင်းသေပါတယ် ၊ တောင်ပေါ်ဒေသက ချစ်သူစုံတွဲတွေကိုမိဘတွေကသဘောမတူတဲ့အခါကြရင် စုံတွဲလိုက်မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို မိမိအဆုံးစီရင်လေ့ရှိကြတဲ့အဆိပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါသည် ။ သူကိုယ်တိုင်ဘဲဆိုင်ကယ်ဖြင့် တောင်ပေါ်မှ သေဆုံးသူဒေါ်အီနားရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို ချက်ချင်းသွားရောက်အကြောင်းကြားခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည် ။
ရိုးသားတဲ့တောင်ပေါ်တိုင်းရင်းသူတွေဟာ ဗမာစကားကို လုံးဝမပြောတတ်ကြပါဘူး ၊ ကျန်ရစ်သူ ဒီကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ကုတင်ဘေးမှာ ငုတ်တုတ်ကလေးတွေထိုင်နေရင်း ရင်ထဲမှာကြေကွဲနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေက မျက်စေ့ထဲကမထွက်ခဲ့ပါဘူး ၊
တကယ်တန်းကြတော့လည်း ဒီကလေးတွေရဲ့ကံကြမ္မာဘဝရှေ့ရေးဟာ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘဲရှိသလား ?
သူစိမ်းတရံဆရာ/မတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိသလား ? ဆိုတာကျွန်တော့်ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအားမကိုးရဘူးလို့ဘဲဆိုချင်ပါတယ်..
မိဘမဲ့ကျောင်း ( သို့ ) မိဘမဲ့ဂေဟာတွေမှာနေကြမယ်ဆိုရင်တောင်သူတို့လေးတွေရဲ့ဘဝဟာတစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ် ၊ အမှန်တကယ်အမွေစားအမွေခံအဖြစ်မွေးစားကြမယ်ဆိုရင်လည်း မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးတစ်ကွဲတစ်ပြားမဖြစ်အောင်တော့မွေးစားကြစေချင်ပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ ကျပ် ၁ သိန်းကို အတန်းပိုင်ဆရာမထံထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးခဲ့တော့ သူ့တပည့်မလေးအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမိတာကိုမြင်တွေ့ခဲရပါတယ် ၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ချမ်းသာတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်း စေတနာသဒါတရားလေးတွေယိမ်းယိုင်ပြီး တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်စေရေးအတွက်ရည်စူးပြီး ဤဆောင်းပါးလေးနဲ့သူတို့လေးတွေကိုယ်စား မေတ္တာရှေ့ထား၍အလှူခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 🙏🙏🙏
Wave Money ဖြင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်သောဖုန်းနံပါတ်များ
ကျောင်အုပ်ဆရာမကြီးဒေါ်နောမိ ( မိုင်းဖြတ် ၊ အမကမူလွန် )
လူအုပ်ကြီး အနံ့ပေါင်းစုံ အမျိုးအစား အစုံတဲ့ အမှိုက်တွေ ဆယ်ယူ သိမ်းနေတဲ့အချိန် အာ့အနီးတစ်ဝိုက် နေထိုင...